Best cod taariikhqorihii: cod record tayo waayi maayo
> Resource > Video > Sidee loo Diiwaan Voice on your computer aan Loss Quality
Miyaad inta badan daawadaan muujinaya nool ama muusiko dhegayso on your computer? Fursadda in aad rabto in aad codka u qoraan si aad u gelin karaan kombuyuutarrada gacanta aad u dhegeysato si ay mar walba aad xitaa marka aan heli karin internet. Kasta oo xal wanaagsan u gudan karo ujeeddada this? Haa, Halkan waa fursad kaamil ah. Streaming taariikhqorihii Audio waa taariikhqorihii ugu fiican cod si ay u caawiyaan. Waxaa kuu saamaxayaa inaad qortid cod aan khasaaro tayo leh ka websites music sida websites Spotify iyo videos sida YouTube. Waa maxay dheeraad ah, ee software duubo cod fiican codka sidoo kale awoodo ka files deegaanka. Waxa aad maqli waa waxa lagu siiyo. Oo waa mid aad u fudud in ay ku shaqeeyaan. Aan ka guurto on in ay arkaan sida ay si sax ah u shaqeeyo.
1 Ku rakib ah oo taariikhqorihii cod ugu wanaagsan
Click Download icon si aad u hesho barnaamijkan oo ku xidh on your computer. Waxaa jira laba nooc si aad u doorato. Waxaanu diiradda saari doonaa version daaqadaha tan iyo markii laba shaqo ku dhowaad si la mid ah.
2 cod Record aan khasaaro tayo leh
Orod barnaamijka si aad u hesho button Record ah ee bidixda xagga kore. Waxaa Click iyo bilaabaan in ay raadiyaan cod on websites sida Spotify. Marka ay cod bilaabo inuu u ciyaaro on your computer, barnaamijka u Qoraynaa doonaa waqti isku mid ah.
Waxaad sidoo kale ka ciyaari kartaa liiska faylasha codka iyo barnaamijka sii shaqeyn kartaa iyada oo kaa caawinaya in aad kala mid kasta si toos ah.
Inta lagu guda jiro geeddi-socodka lagu qoro, waa in aad leedahay xiriir internet oo wanaagsan si aad u hesho dhamaystiran cod files.
Ka dib markii duubo, waxa ay noqon doontaa fikrad fiican in aad wareejiso faylasha codka qalabka la qaadi karo si aad u qaadato on go ah.
Dooro faylasha codka oo guji badhanka dar Lugood in. Markaas waxaad iyaga ku heli kartaa Lugood soo bandhigeen in playlist SAR ah. Ama waxaad xaq-riixi kartaa faylasha iyo dooran Add to Lugood Library in menu pop-up ah. Tani waxay kaa caawin kartaa gaaro natiijo la mid ah. Hadda waxaad u hagaagsan kartaa in mid ka mid ah aaladaha Apple aad.
Si aad u wareejin faylasha codka qalabka kale sida telefoonka Samsung, waxaad xaq u-riixi kartaa faylasha codka dooro Open ee Folder si loo helo meesha files ee ku kaydsan yihiin. Markaas nuqul ama jiidi qalabka aad.
Fiiro Gaar ah: Wixii version Mac, waxaa jira Add ma button Lugood in. Laakiin waxaad riixi kartaa fure Control ku keyboard iyo guji faylka waqti isku mid ah ka dibna dooro Show in Folder si aad u ogaato meesha file waa. Ka dib markii in, u tag Lugood in ay dajiyaan faylka adigoo gujinaya "File"> "Add to Library". Taasi waxa ay samaysay.
Marka laga reebo feature diiwaangelinta cod ugu wanaagsan ee barnaamijka, waxa ay sidoo kale kuu saamaxayaa inaad sameyso giraan codadka iyo edit macluumaadka. Ma sugi karaa in ay isku dayaan naftaada? Waxaa Download iyo hadda bilowday.